Hitako hoe Be dia Be ny Tsy Rariny
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Notantarain’i Patrick O’Kane
TERAKA tany Irlandy Avaratra aho tamin’ny 1965, ary nahantra izahay. Nihalehibe tao County Derry aho nandritra an’ilay adin’ny Katolika sy ny Protestanta, izay naharitra 30 taona mahery. Tsapan’ireo Katolika vitsy an’isa hoe nailikiliky ny Protestanta maro an’isa izy ireo. Nolazain’izy ireo fa tsy rariny ny ataon’ny Protestanta eo amin’ny resaka fifidianana sy fampiharana sazy ary fanomezana asa sy trano.
Hitako hoe be dia be ny tsy rariny sy ny fanavakavahana. Tsy tsaroako intsony hoe impiry aho no novelezina, nosintonina avy teny ambony fiara sy nambanana basy, na nalaina am-bavany sy nokarohin’ny polisy sy miaramila. Tsapako hoe niharan’ny tsy rariny aho. Nieritreritra àry aho hoe: ‘Na izaho manaiky, na izaho manohitra!’
Nandray anjara aho tamin’ny diabe ho fahatsiarovana an’ireo olona 14 notifirin’ny miaramila anglisy tamin’ny 1972. Nandeha koa aho tamin’ny diabe ho fanomezam-boninahitra an’ireo gadra repoblikanina nitokona tsy nihinan-kanina, izay maty tamin’ny 1981. Nanangana ny sainan’i Irlandy Avaratra aho nefa voarara izany. Nasiako soratsoratra sy kisarisary manohitra ny Anglisy teny rehetra teny. Hoatran’ny hoe nisy Katolika nanaovana habibiana sy novonoina foana ka nilaina ny nitokona. Matetika ny diabe nataonay no lasa rotaka.
Niaraka tamin’ireo mpianatra nitolona mba hiaro ny tontolo iainana aho, teny amin’ny oniversite. Nifindra tany Londres aho, tatỳ aoriana, ary nandray anjara tamin’ny diabe ho fanoherana ny lalàna toa miaro ny manan-katao nefa mambotry ny madinika. Nitokona niaraka tamin’ireo mpiasa tsy nanaiky fampihenan-karama aho. Nanao ilay diabe ho fanoherana ny fandoavan-ketra koa aho, tamin’ny 1990. Simba be ilay toerana atao hoe Trafalgar Square, noho ny nataon’ireo mpikomy nanao io diabe io.
Diso fanantenana aho tamin’ny farany, satria tsy tratra ny tanjonay matetika. Vao mainka aza ny fitokonana nampitombo fankahalana.
Tsy mahafoana ny tsy rariny sy ny fanavakavahana ny olombelona, na dia tsara fikasa aza
Tamin’izay indrindra no nisy namako nampifankahalala ahy tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nampianarin’izy ireo ahy tao amin’ny Baiboly fa malahelo Andriamanitra mahita antsika mijaly ary hofoanany ny fahoriana rehetra vokatry ny ataon’ny olombelona. (Isaia 65:17; Apokalypsy 21:3, 4) Tsy mahafoana ny tsy rariny sy ny fanavakavahana ny olombelona, na dia tsara fikasa aza. Mila ny tari-dalan’Andriamanitra isika. Izy irery koa no mahavita mandresy ny hery tsy hita maso mahatonga ny olana eran-tany.—Jeremia 10:23; Efesianina 6:12.
Tsapako izao fa herim-po very maina ny ezaka nataoko hiadiana amin’ny tsy rariny. Maivamaivana erỳ aho mahalala fa ho avy ny fotoana hanjakan’ny rariny eto an-tany, ka tsy hisy intsony ny fanavakavahana.
Ampianarin’ny Baiboly fa “tia rariny” i Jehovah Andriamanitra. (Salamo 37:28) Afaka matoky àry isika fa tena hahavita hampanjaka ny rariny izy, fa tsy toa an’ireo mpitondra olombelona. (Daniela 2:44) Miresaha amin’ny Vavolombelon’i Jehovah eny aminareo na jereo ny www.jw.org/mg, raha mila fanazavana fanampiny ianao.
Hizara Hizara Hitako hoe Be dia Be ny Tsy Rariny